Wasiiro ka tirsan dowladda KMG oo maanta gaaray gobolka J/hoose | raascasayrmedia.com
← Mahiga oo ka biya diiday in hay’adaha QM ay yimaadaan Somaliya
Farmaajo iyo Raila Odinga oo kulan ku yeelanaya Nairobi →
Wasiiro ka tirsan dowladda KMG oo maanta gaaray gobolka J/hoose
Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya ayaa maanta gaaray deegaano ka tirsan deegaano ka tirsan degmada Dhoobley oo dhawaan ciidamad dowladda KMG ay kala wareegeen xarakada Al Shabaab.
Wafdigii ka tirsanaa dowladda KMG islamarkaana isugu jiray xildhibaanada iyo wasiirada Xukuumada KMG ee maalmihii u dambeeyay ku sugnaa Magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa maanta waxa ay gaareen deegaano hoostaga degmada Dhoobley ee gobolka J/hoose.
Wasiir ku xigeenka wasaarada gaadhaandhiga xukuumada KMG Soomaaliya C/rashiid Max’ed Xidig oo maanta la hadlay Shabakadda warbaahinta Shabelle ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ku suganyihiin qeybo ka mid ah gobolka J/hoose halkaasi oo uu tilmaamay in dhawaan ay dagaal ugala wareegeen xarakada Al Shabaab.
Waxa uu sheegay wasiirku in ay dhiiri galinayaan ciidamada dowladda ee la dagaalamaya AL Shabaab isagoo tilmaamay in halkaasi aysan dib uga soo laaban doonin wasiirada iyo xildhibaanada ilaa inta gobolada Jubooyinka ay soo galayaan gacanta dowladda KMG Soomaaliya.
Dhanka kale magaalada Dhoobley ee gobolka J/hoose oo dhawaan ay ku dagaalameen ciidamada Al Shabaab iyo dowladda KMG ayaa laga dareemayaa xaalad kacsanaan ah sida Shabelle ay u sheegeen dad goobjoogayaal ah.